Horse Zodiac China | Afọ nke inyinya | Ihe ngosi Zodiac nke China - Ihe Ịrịba Ama Zodiac
Afọ nke Horsnyịnya: Zodị Zonyịnya Zodiac nke China, &dị mmadụ & Njirimara ya
Afọ nke Horsnyịnya:
Zodị ịnyịnya Zodiac nke China, alitydị mmadụ & Njirimara ya
N'ime akara ndị China, ọ bụ Horse na-anọchite nnwere onwe nke uche, ahụ na mkpụrụ obi!
nwoke sagittarius na akwa ya na libra nwaanyị
Ndị amụrụ na Afọ inyinya nwere mmụọ di elu , na-agagharị mgbe nile ma ọ ga-enwerịrị nnwere onwe ịgagharị. N'ezie, ezi nnwere onwe dị ezigbo mkpa na ụdị ịnyịnya ndị China na ọnwụ ya bụ otu ikpe ọnwụ.
Chinese Zodiac Horse Isiokwu Ndị Dị na Ya
Àgwà, Àgwà, na Àgwà
Dị Horsdị Anyịnya Zodiac China
Ndakọrịta - Na &hụnanya & Ndina
Laghachi na akara Zodiac niile nke China
Àgwà, mmadụ na akparamagwa
Agile nke uche na ahu, akara zodiac a nke China bu egwuregwu di egwu ma hụ ezigbo agbụrụ ma ọ bụ egwuregwu aka mgba. N'ihi enweghị mmụọ ha ngwa ngwa, Horse Horse na-agbanwe mgbe niile na oke ọsọ n'ihi na ha na-amụta nka ọhụụ na ngwa ngwa.
Nke a ebum pụta ụwa àgwà mmadụ na-eme ka ha bụrụ ezigbo ndị ahịa ndi bu ndi di ebube n’ichi otutu ndi; nwee ike iburu ibu ọrụ di oke itunanya ma mezue ha dika oke nkenke. Ọzọkwa, ha nwere ike ịba ọgaranya n'ụzọ dị mfe mana ọ bụchaghị na-edobe ya n'ihi na ha na-agbanwe echiche ha na atụmatụ ha oge niile.
Na Horsnyịnya ndị China na-ekpo ọkụ ma na-adọrọ mmasị ma na-agbanwe agbanwe ya mere adaberekwala na ndụ gị ruo ogologo oge. Agbanyeghị, a tụkwasịrị ha obi ma nwee ike ịkọwa ya.
Ihe efu na obi ojoo na-eme ka Horsnyịnya China na-atụba iwe . Ikekwe n'ihi ugboro ole ha na-eme, ịkwanyere ndị ọzọ ùgwù bụ ihe na-agwụ ike maka akara zodiac nke China a. Mpempe akwụkwọ horoscope nke China maka akara zodiac a na-esekarị onyinyo ndụ jupụtara n'ọtụtụ arụmụka ma ọ bụrụ na ọ bụghị ịlụ ọgụ.
Na Horse China ‘ọsụsọ obere ihe’ na, ọ bụ ezie na o nwere uche ghere oghe, nwere ike ịbụ onye nwere obere uche na onye akabeghị aka na mmekọrịta ya na ndị ọzọ.
N'ihi na ha lekwasịrị anya na onwe ha, selfnyịnya China ga-enwe isi ha n'ígwé ojii nke na-eme ka ha bụrụ ndị na-echezọ ncheta ma ghara ịdabere na ha.
Horse Zodiac China na Ihe Ise
Dịka ọ dị na Western Astrology, ọ nweghị onye akọwapụtara naanị site na isi Zodiac ma ọ bụ Sun Sign. Na Astrology nke China , nke ọ bụla n’ime ụmụ anụmanụ nke Afọ Ọhụrụ ’àgwà na njirimara bụ agba site na 2 nke 5 ọcha .
Onye ọ bụla nke Anụmanụ Zodiac iri na abụọ nke China nwere ihe ekwenyegoro na ya nke na-emetụta ụdị mmadụ ha bụ. Na mgbakwunye, mmewere nke afọ ọmụmụ mmadụ bụ mmetụta nke abụọ na onye ha bụ, nwere ike na ga-abụ, ebumnuche ndụ, ụzọ ọrụ, wdg.
Pịgharịa gaa chọta afọ ọmụmụ gị. Nke a ga - agwa gị ụdị 'ụdị' ịnyịnya China ị bụ wee nyere gị aka ịmatakwu banyere etu ike nke ihe ofeke na nke abụọ siri metụta ndụ gị.
Ọnwa Abụọ 15, 1942-Feb. 4, 1943
Abụọ 12, 2002-Jan. 31, 2003
Mmụọ a na-ahụ maka inyinya mmiri ahụ na - achọ ịgagharị n’elu ụwa dịka ihe atụ ya mere; na-asọ asọ ebe a, na-atụgharị ebe ahụ.
N'ịbụ onye na-agbanwe agbanwe, anụmanụ zodiac a na-enwe obi ụtọ ma dị ukwuu na lemon.
Ndi amuru n’aho aho mmiri ocha jiri obi uto dicha nma. Ha ga-eme ka ị chịa ọchị ogologo oge ha nọ gburugburu mana ha nwere wanderlust karịa Chinesenyịnya ndị ọzọ nke China ka oge gị na ha yikarịrị ka ọ ga-adị obere.
Mụta ihe niile banyere akara na njirimara nke ihe mmiri .
Ọnwa Mbụ 25, 1906-Feb. 12, 1907
Ọnwa Mbụ 21, 1966-Feb. 8, 1967
Abụọ 17, 2026-Feb. 5, 2027
Horsnyịnya Ọkụ bụ akara ọkụ ọkụ okpukpu abụọ ka akụkụ ọ bụla nke àgwà ha dịkwuo. Ikwu na Chinesenyịnya China a bu ihe ekwesighi ekwesi dika ogugu; akụkụ ọ bụla nke ndụ ha na-ebi na nsọtụ.
Ndị amụrụ na Afọ Ọkụ Ọkụ nwere ọgụgụ isi na oke. Anyịnya Ọkụ na-agwụ ike n'otu ntabi anya. Mkpa ha nwere maka mkpali na-eme ka ha si na ọbụbụenyi banye na ọbụbụenyi, ọrụ na ọrụ na ụlọ n'ụlọ na ngwa ngwa ngwa ngwa na ọtụtụ karịa ụdị elementrị ndị ọzọ nke ịnyịnya China.
Mmasị ha nwere maka ihe niile nwere ike ịbụ ihe ịtụnanya. Ma mgbe oke iwe ọkụ nke ịnyịnya Fire Horses na-eweghachi isi ya dị njọ ọ bụ ihe na-emenye ụjọ n'ezie.
Mụta ihe niile banyere akara na njirimara nke ihe ọkụ .
Ọnwa Mbụ 30, 1930-Feb. 16, 1931
Ọnwa Mbụ 27, 1990-Feb. 14, 1991
Adrenaline junkies, Horsnyịnya Metnyịnya nwere agụụ na-enweghị atụ maka nnukwu njem na ịhụnanya na-eme (nke dị iche na mmekọahụ). N'ihi nke a na ntụgharị ha nke ihe ọ bụla / onye ọ bụla ha kwenyere ga-ewepụ obere ntakịrị nnwere onwe ha, Horsnyịnya Igwe na-agbanwekarị ọrụ, ndị mmekọ, ụlọ, ebe, ndị enyi, wdg.
Ndị amụrụ n'afọ Afọ ịnyịnya nwere agụụ ihe niile na ndụ nwere ịnye mmadụ na-adọta ndị mmadụ n'ebe ha nọ yana agụụ mmekọahụ ha bụ akụkọ ifo.
Ngwongwo nke igwe na-eme ka ha buru ndi na-eche banyere onwe ha karia Inyinya nke ihe ndi ozo.
Ọnwa Abụọ 3, 1954-Jan. 23, 1955
Jenụwarị 24, 2014-Feb. 18, 2015
Osisi Horse bụ ezigbo obi ụtọ n’etiti ihe niile metụtara Horsnyịnya China. Anụmanụ zodiac nke China a abụghị obere mmụọ karịa ndị ọzọ mana ihe mmebe nke osisi dị na chaatị astrological ya na-eme ka ha kwụsie ike karị; na-erughị ala ma na-adịkarịghị ewe iwe ọkụ
Obi ụtọ na-atọ ụtọ, na-atọ ọchị ma na-atọ ọchị, Wood Horse bụ mkparịta ụka na-atụ egwu nke na-arụ ọrụ nke ọma na ndị ọzọ (ọbụlagodi na ha abụghị onye isi).
Ndị amụrụ n'afọ nke ịnyịnya osisi na-abụkarị ọrụ siri ike nke ịnyịnya ndị China. Ha kwadebere nke ọma ịnwe ịdọ aka ná ntị ọ chọrọ iji hụ ọrụ ruo n'ọgwụgwụ yana ịchekwa mmekọrịta dị ogologo oge nke ụdị niile.
Ọnwa Abụọ 11, 1918-Jan. 31, 1919
Ọnwa Abụọ 7, 1978-Jan. 27, 1979
Ndị amụrụ na Afọ nke Horsnyịnya maywa nwere ike bụrụ ndị tozuru oke nke ịnyịnya ndị China. Ha anaghị eme ọsọ ọsọ banye na ọnọdụ. Ha na-ewepụta oge wee tụlee okwu a na-eme n'akụkụ niile tupu ha ahọrọ ihe ha ga-eme. Otú ọ dị, ha nwere ike ịbụ ndị na-enweghị obi abụọ.
Anumanu zodiac nke China a nwere anwansi iji mee ezigbo ego obuna ma oburu na o na-ele ndi ozo anya na o gha aghaghi ime ka okwu ghara ifu. N'ezie, Horsnyịnya iswa maara nke ọma n'ihe metụtara ego, ha nwere ike ịhụ otu esi eweghachite azụmaahịa na ịba uru ọbụlagodi na ụlọ ọrụ ahụ dị n'ọnwụ.
Mụta ihe niile banyere akara na njirimara nke mmewere ụwa .
capricorn nwoke na pisces nwanyị n'ịhụnanya
Eziokwu Horse Horse & Mkpakọrịta Metaphysical
Ofu mmewere: Ọkụ
Osisi: White Birch
Nọmba: Ihe omuma: 8
Nkume ọmụmụ: Topaz
Zodiac nke n'Ebe Ọdịda Anyanwụ: Gemini
Mmekọrịta hụnanya Kachasị Mma: Nkịta China , Agụ China
Horsnyịnya Celebrity: Paul McCartney, Barbara Streisand, John Travolta, Michael York, Clint Eastwood, Ella Fitzgerald, Kevin Costner, Cindy Crawford, James Dean, Sean Connery, Neil Armstrong, Chris Evert, Harrison Ford, Jerry Goldsmith, Gene Hackman, Ulysses S. Grant, Ingmar Bergman, Robert Duvall, William Holden, Patty Hearst, James Earl Jones, Agnes Moorehead, Rembrandt, Theodore Roosevelt, Martin Scorsese
Ngwakọta Ngwakọta Zodiac nke China
N'inwe obi uto na ihunanya, Horsnyịnya China bụ onye hụrụ n'anya nke ukwuu.
Super sexy, ha na-ahụ n'anya na ha ga-enwe ọtụtụ ihe. Dị ka Zodiac Horse nke China achọghị ka ejide ya n'ụzọ ọ bụla, nsogbu nke ha ịnọgide na-enwe mmekọrịta na-adịgide adịgide ma ọ bụ alụmdi na nwunye anaghị adịkarị mfe.
Horsnyịnya ndị China enweghị ndidi n'ihi ya, mgbe ha hụrụ onye ha masịrị ha, ha na-atụ anya na onye ahụ ga-atụba onwe ha ozugbo na mmekọrịta ịhụnanya yana 100% gbahapụ ma ọ bụrụ na ha emeghị, petnyịnya a na-eme njem ga-azọda ụkwụ ha wee tụfuo otu n'ime aha ọjọọ ha. nke iwe.
Zodiac China maka Kidsmụaka: Nwa Nwa
A mụrụ ụmụaka Horse na-ekwu okwu. N'ihi enweghị isi nke anụ ọhịa Zodiac nke China a, ha nwere mmasị ịnụ olu nke ha ma na-agagharị n'ihu.
Ndị a nwere obi ụtọ na-atọ ụtọ ịnọ n'èzí ma na-arụsi ọrụ ike mgbe niile ịchụso nnukwu njem. Enweghị egwu na-esite n'echiche nke na-esighị ike ichebara echiche na ha nwere ike ịmehie ihe n'ihi ya, ndị nne na nna kwesịrị ilezi anya na ụmụaka Horsnyịnya ha agaghị emerụ ahụ nke ukwuu.
Jikere ịzụta ọtụtụ nri nri dịka ụmụaka Horse China nwere agụụ na-agụ agụụ, ikekwe n'ihi na ha na-anọkarị na-emegharị ahụ.
Mkpa maka nnwere onwe zuru oke na-amalite n'isi na ụmụ ịnyịnya China ga-ama ụma na-ese okwu ma jụ ịgbaso iwu ma ọ bụrụ na ọ dị ha ka ha tọrọ atọ n'ụzọ ọ bụla.
mgbe komet halley na-alaghachi
capricorn nwoke na pisces nwanyị mmekọahụ
ụzọ ndụ m nọmba bụ 6
gini bu anwu bu anyanwu taa